ब्रिलियन्ट जी लामो समय पछी रमाइलो प्रस्तुती लिएर आउनु भयो। शुरुबातमै सस्पेन्स। अब के हुने हो?
ल खोल्दै गरौ कथा। तपाइको गाउ ठाउको पनि ज्ञान हुने भयो।
बरु यो अतीतका शुरुवातको कथा अहिले सम्मै चलेको छ वा कहासम्म पुगेर टुङ्गयो... ??
अर्को अंकको प्रतिक्षा गर्दैछौं छिट्टै लेख्‍नुहोला ।